Costa Dorada - နောက်တစ်အားလပ်ရက်မှာဘာတွေကြည့်ရှုရမလဲ ခရီးသွားသတင်း
Susana godoy | 08/04/2021 11:03 | ခရီးသွားနေရာများ
ကော့စတာဒါရာဒါတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ချင်ပါသလား ၎င်းသည်စပိန်ပထဝီဝင်၏အကျော်ကြားဆုံးနယ်ပယ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာစီလိုနာ၏အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးမရေမတွက်နိုင်သောကမ်းခြေများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများရှိပြီး၎င်းကိုဖြစ်နိုင်လျှင် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေသည်။
သို့သော်ထိုသို့မှန်ကန်သည် ဒီareaရိယာဟာကမ်းခြေတွေထက်အများကြီးပိုတာကြောင့်ပုံပြင်တွေနဲ့ဒဏ္legာရီတွေတောင်ပြည့်နှက်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းဟာနေရာအနှံ့မှာရှိနေပါတယ် သူမအကြောင်း။ ထို့ကြောင့်၊ သင်လည်ပတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးနှင့်သင်၏အားလပ်ရက်များတွင်သင်လုပ်နိုင်သည်များကိုလည်းမလွဲနိုင်ပါ။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များပေါ်တွင်သင်၏အရာအားလုံးရှိလိမ့်မည်။ သင်ပျော်မွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
4 အဆိုပါ Salou ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံသို့တစ် ဦး အလည်အပတ်
5 Reus ရှိ Gaudi ၏ဘဝ
6 ရဲ့ Cistercian လမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားရကြပါစို့!
ကော့စတာဒေါရာဒါဒေသတွင်ဒေသများစွာရှိသည်။ သို့သော်တာရာဂိုနာသည်ပထမနေရာတွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့သူမ၏၏ပြောနိုင်ပါတယ် Tarraco လို့ခေါ်တဲ့အပျက်အယွင်းတွေဆီကပြသထားတဲ့အရာအားလုံးကိုကြည့်ပြီးဒီပြတိုက်ဟာလေပြတိုက်တစ်ခုလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Scipios နှင့်မျှော်စင်များကဲ့သို့ရောမခေတ်သို့ပြန်မသွားသောတံတားများ၊ မျှော်စင်များကိုရှာဖွေရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သိသင့်သောကျောက်မျက်များနှင့်အတူအရေးကြီးဆုံးရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Santa Tecla၊ Mirador del Mediterráneoသို့မဟုတ် Port သို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သင်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုသင်လက်လွတ်မဖြတ်နိုင်ပါ။
ကျနော်တို့အချိန်အတွက်ခရီးသွားလာမှပစ္စုပ္ပန်မှပြန်လာနှင့်၎င်း၏ကမ်းခြေအားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သွား၏။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသဲသောင်ပြင်တွေအမြဲတည်ရှိမယ့်isရိယာဖြစ်ပြီးသူတို့ကအရမ်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အဲဒီပုံဆောင်ခဲရေတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားလို့ပဲ။ La Pineda သည်ပြီးပြည့်စုံသောသဲသောင်ပြင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂ ကီလိုမီတာကျော်ကျော်သင်လှည့်လည်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေငုပ်ခြင်းလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ Waikiki ဟုလည်းလူသိများသော Cala Fonda သည်တာရာဂိုနာ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးဆိတ်ငြိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Santes Creus သဲသောင်ပြင်သည်၎င်း၏ရှုခင်းများနှင့်ပင်လယ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်သင့်ကိုအထင်ကြီးစေလိမ့်မည်။ မိသားစုနှင့်အတူတစ်ရက်အဘို့နှင့်ထင်းရှူးသစ်တောများဝိုင်းရံ Cap Roig သဲသောင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခရီးသွားခြင်း၏စွန့်စားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်တည်းခိုခန်းနှင့်စတင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကမ်းခြေတွေအကြောင်းပြောရင်အပန်းဖြေစခန်းတွေကအသေးစိတ်ဇာတ်ကောင်တွေပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာပိုပြီးချွေတာတဲ့၊ လက်တွေ့ကျပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကော့စတာဒိုဒါစခန်း။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ဟာသာယာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲရှိနေမှာပါ။ အနီးအနား ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်အတူသင်ခံစားမိသည့်အခါကျေးလက်ဒေသနှင့်ကမ်းခြေကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
အဆိုပါ Salou ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံသို့တစ် ဦး အလည်အပတ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ်းခြေတွေ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအပြင် Salou လည်းအဲဒီမှာရှိတယ် PortAventura ကမ္ဘာ့ဖလားဆောင်ပုဒ်။ အထူးသဖြင့်သင့်ကလေးများနှင့်အတူသွားလျှင်၎င်းသည်မဖြစ်မနေလည်ပတ်ခြင်းထက်မကဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့မင်းမိသားစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်လို့သူတို့အတွက်မက်လုံးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ Salou သည်ယဉ်ကျေးမှုအရဆုံးနေရာကိုသင်နှစ်သက်လိုလျှင် Torre Vella ခံတပ်ကဲ့သို့အထူးနေရာများကိုလည်းပေးသည်။
Reus ရှိ Gaudi ၏ဘဝ
Geusíရဲ့ပုခက်လို Reus ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားတာလည်းသင်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး နှင့်သမျှသောအရာ။ နှစ်ပေါင်းများစွာသူဤဒေသတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်နှင့်ယနေ့က၎င်း၏ထောင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အလွန်ကြီးစွာသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ Plaza del Ayuntamiento တွင်တည်ရှိသောအနက်ဖွင့်စင်ဖြစ်သောGaudíစင်တာနှင့်သူ၏နေအိမ်ကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အနုပညာရှင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သူ၏အခန်းကဏ္reproduကိုပြန်လည်ပုံတူကူးနိုင်သောအခန်းလည်းရှိသည်။
ရဲ့ Cistercian လမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားရကြပါစို့!
သင် ပို၍ သဘောကျလျှင်သင်ခြေကျင်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စက်ဘီးဖြင့်သော်လည်းကောင်းပြုနိုင်သည်။ ဒီလမ်းကြောင်းမှာသင်ရှိသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၃ ကျောင်းဖြစ်သောမဖြစ်မနေမှတ်တိုင် ၃ ခု - Vallbona, Poblet နှင့် Santes Creus။ သိသာထင်ရှားပေမယ့် gastronomy နှင့်သင်တန်း၏, လက်မှုပညာအတွက်၎င်း၏ဗိသုကာ၏စည်းစိမ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ် ဦး ထက်ပိုပြီးပြည့်စုံသောmoreရိယာ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော့စတာဒေါရာဒါးသို့လည်ပတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်တွင်လည်းပါဝင်နိုင်သည်။
Delta del Ebro ပန်းခြံသို့လည်ပတ်ခြင်းသည်အခြေခံအချက်များနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် စဉ်းစားရန်။ ထိုထဲတွင်သင်သည်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်မြောက်မြားစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားတစ်သက်တာအတွက်ပျော်မွေ့ရန်နှင့်မှတ်မိနိုင်သောသာယာသောအတွေ့အကြုံနောက်တစ်ခုကိုပေးသည်။ Ebro မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှလှေစီးခရီးစဉ်။ ကောင်းပါပြီ၊ သဘာဝနှင့်ကမ်းခြေများကိုနှစ်သက်သောအရေးကြီးဆုံးမြစ်တစ်ခု၏နှုတ်ကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သင့်တွင်တစ်နာရီခန့်နီးပါးရှိသောတစ်နာရီခန့်လမ်းကြောင်းရှိသည်။ မင်းရဲ့အားလပ်ရက်ကိုဘယ်နေရာမှာစမလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » ကော်စတာဒါရာဒါတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း